Indlu enevaranda emangalisayo kufutshane ne-kitesurfing lagoon - I-Airbnb
Indlu enevaranda emangalisayo kufutshane ne-kitesurfing lagoon
Le yindlu enevaranda enomtsalane eneshawa yendalo, kufutshane kakhulu ne-kitesurfing lagoon. Ifumaneka eMargarita Village, apho kukho ii-bungalows eziyi-4, ivilla enye, ibhari, ivenkile yokutyela kunye neendawo ezintle (izimvo ezininzi kwi-intanethi)!! Le yindawo entle onokukhetha kuyo ukuhlala kufutshane nekhayithi nakwindawo yesixeko i-halpitiya. Ikwindawo eqhelekileyo yasemaphandleni kwaye iseyindawo yendalo! Sinezinto zokuzikhusela ezifumanekayo kwiindwendwe zethu kuphela ibe sicebisa ngeendawo eziphambili zekhayithi kule ndawo
Ndikwindawo ethobekileyo ejikelezwe yimithi yeecoconuts. Abamelwane bam banobubele ibe banobubele kakhulu